10-ruux oo ku geeriyootay qaraxii caawa ka dhacay maqaaxi ku taal wadada Maka Al-Mukarama – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
12th October 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com- In ka badan 10-ruux ayaa ku geeriyootay qarax caawa ka dhacay maqaaxi lagu qaxweeyo oo ku taal wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo maqaaxidan ay ka mid tahay maqaaxida caanka ah ee dadka habeenkii ay isugu yimaadaan.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxayay qaraxan oo ahaa mid si aad ah looga maqlay magaalada oo dhan, waxaana uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay albaabka hore maqaaxida.
Ilaa 15 kale oo dhaawac ah ayaa laga qaaday goobta, kuwaasoo la geeyay Isbitaalada, waxaana laga yaabaa in qasaaraha uu intaas ka bato, maadaama goobtu aheyd meel dad badan ay fadhiyeen, wadadana la marayay.
Milkiilaha Maqaaxida Oromo Coffee ayaa sheegay in ilaa tobaneeyo ruux oo ay ku jiraan shaqaalaha maqaaxidiisa iyo dad shacab ahaa oo ka qaxweynayay ay ku dhinteen qaraxan, isagoo xusay in aanu garan karin ujeedka loo bartilmaameedsaday maqaaxidiisa.
“Maqaayadeeda gaari is qarxin ah ayaa galay oo lagu dhiftay albaabka maqaayada, dad shacab ayaa ku baabaay oo shaqaalaheeda ku jiray aniga waa ka maqnaa meesha markii wax dhacayeen, shaqaalaheyga waxaa ay ahaayeen tobaneeyo, hada waxaa u jeedaa kaliya labo, inta kale dhimasho iyo dhaawac inay gaareen u maleynayaa”ayuu yiri Milkiilaha Maqaaxida Oromo Coffee oo la hadlayay warbaahinta maxaliga ah.
Barxada maqaaxida ayaa waxaa ka muuqday dhiig badan iyo hilbaha dad go’ go’ay, waxaana gawaarida gurmadka deg dega ay daabuleen dhaawacyo fara badan oo qaarkood ay aad u liiteen.
Ciidamada ammaanka ayaa goobta xiray, waxaan wadada ay ka xiran tahay inta u dhaxeysa Isgoysyada Dabka iyo Sayidka oo ay ku taalo maqaaxida.
Ilaa iyo hada cid sheegatay ma jirto, hase ahaatee Al-Shabaab ayaa looga bartay qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan caawa ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama uu ku soo aaday, iyadoo bilihii la soo dhaafay xaalada ammaan ay aheyd mid wanaagsan.
Daawo Sawirada Madaxweynaha Soomaaliya iyo Masuuliyiin kale oo xalay ka qeyb galay Munaasabad ka dhacday Muqdisho